Dambiisha Adeegu waxay faafisaa bakteriyo. | Somaliska
Cilmi baaris laga sameeyay magaalada Bollnäs ayaa soo bandhigtay in dambiilaha loo isticmaalo adeega (shopping) ay faafiso bakteriyada dhalisa cudurada. Bakteriyada ku jirta dadka gacmahooda, hilibka iyo cuntooyinka kale ayaa waxa ay ku faaftaa dambiilaha loo isticmaalo adeega ayadoon ka rooneyn dhulka lagu socdo sida lagu soo bandhigay cilmi baarista. Dhamaan dambiilaha la baaray ayaan baasin baaritaankii lagu sameeyay. Ayadoo aysan jirin nidaam cad ee sheegayo sida loo nadiifanayo ama loo isticmaalayo dambiilaha, taas oo qofka adeeganaya ay tahay in uu masuuliyad iska saaro caafimaadkiisa. "Qofka adeeganaya waa in uu ka fikiraa arintaan" ayuu yiri cunto baare “ Björn Walldén
Dambiisha Adeegu waxay faafisaa bakteriyo.
Cilmi baaris laga sameeyay magaalada Bollnäs ayaa soo bandhigtay in dambiilaha loo isticmaalo adeega (shopping) ay faafiso bakteriyada dhalisa cudurada.
Bakteriyada ku jirta dadka gacmahooda, hilibka iyo cuntooyinka kale ayaa waxa ay ku faaftaa dambiilaha loo isticmaalo adeega ayadoon ka rooneyn dhulka lagu socdo sida lagu soo bandhigay cilmi baarista.
Dhamaan dambiilaha la baaray ayaan baasin baaritaankii lagu sameeyay.
Ayadoo aysan jirin nidaam cad ee sheegayo sida loo nadiifanayo ama loo isticmaalayo dambiilaha, taas oo qofka adeeganaya ay tahay in uu masuuliyad iska saaro caafimaadkiisa.
“Qofka adeeganaya waa in uu ka fikiraa arintaan” ayuu yiri cunto baare “ Björn Walldén
Nin ku soo dhuuntay diyaarad ka timid Ethiopia iyo shaqaalaha Arlanda oo la yaaban sida uu ku badbaaday
Soomaalida oo isaga carartay tuulada Forserum
Waa markale iyo mowduucii waa Maxay Påsk?